Fanaraha-maso ny tosidra tsy misy tariby IHealth Track - mitandrema amin'ny fahasalamanao!
iHealth, trano hendry, fahasalamana
Te hikarakara ny vatanao amin'ny fomba tsara indrindra ve ianao? Aza adino ny refesina ny tosidranao! Ny mpanara-maso tosi-drà iHealth Track mora ampiasaina, dia hanampy anao amin'izany. Araho maso ny fahasalamanao isan'andro noho ny vahaolana marani-tsaina! Amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena momba ny anao ...
Ny tsenan'ny Smart Home dia manao zavatra tsara na eo aza ny Pandemika - ireo no vinavina
Inona no vokatry ny areti-mifindra Coronavirus amin'ny tsenan'ny Smart Home? Hay tsy dia lehibe loatra izany. Tsy vitan'ny hoe tsy mihena izy io fa mitombo foana! Io no asehon'ny vinavina farany. Andrasana ny tsena manerantany ...
andry, Google Home
Fitiavana maranitra sy ny manodidina ahy - Tsanganana
3 Aogositra 2020
Efa fantatra nandritra ny fotoana ela fa ny olona manana faniriana tsy mivoatra no hita fa ny fianakaviana sy ny olon-tiana ary ny fiaraha-monina. Rehefa dinihina tokoa, ny fialamboly mahaliana indrindra dia: "dia lavitra sy lavitra", "mozika" (mihaino, mazava ho azy, satria milalao ...
IKEA Tradfri - famerenana takamoa maranitra telo
vavahady, ikea, ikea tradfri, trano hendry, jiro marevaka
IKEA dia nanapa-kevitra ny hamoaka ny rafitra mahay manokana ao an-trano antsoina hoe IKEA Tradfri taona vitsivitsy lasa izay. Hatramin'izay dia niezaka nanatsara hatrany sy nanitatra ireo fitaovana marani-tsaina izy, izay ahitana: jiro, ...
Vita ny tetikasa SmartMe tokana - ny fomba hanampian'ny robot ireo olona manana fahasembanana
Bobot, 3180 bobot bobot, roborock, roborock S50, Robot, trano hendry
Matetika, ny zavatra tsy mahazatra indrindra dia avy amin'ny lafiny tsy ampoizina indrindra. Amin'ity vondrona ity dia ampidiriko ny tetikasanay voalohany izay nahitanay fa ny robots dia afaka manampy ny olona sembana. Rehefa nanomboka SmartMe izahay dia tsy nanantena izany ...
Abode iota - mpanamboatra vahaolana maranitra hafa miaraka amina fanavaozana vitsivitsy
nitoetra, sensor / misokatra, sensor sensor, malefaka sensor, sensor sensor, Hub, trano hendry
Ny tontolon'ny trano manan-tsaina dia mivoatra tsy tapaka, noho ny maha-mpanjifa azy dia mandray soa betsaka. Noho izany, rehefa misy vahaolana iray hafa misy vahaolana maranitra izay tsy mitovy, dia soratanay foana izany. Iray mpamokatra ...